विज्ञान-प्रविधि – Page5– SidhaRekha
२०७३ चैत्र १९, शनिबार ११:३४२०७३ चैत्र १९, शनिबार ११:३४२०७३ चैत्र १९, शनिबार ११:३४ by Ghanshyam Sagar
कम्प्युटरको बिर्सेको पासवर्ड कसरी री-सेट गर्ने ?
धेरैजसो कम्प्युटरका प्रयोगकर्तामा कम्प्युटरको पासवर्ड बिसियो भने के गर्ने भन्ने अन्योल हुन्छ । पासवर्ड बिर्सियो भने सजिलै अनलक गर्न सकिदैन । यदी तपाई कम्प्युटरको पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने नआत्तिनुहोस् । Windows7को पासवर्ड बिर्सनु भयो भने पासवर्ड बदल्न निम्न तरिका अपनाउनुहोस्: Windows7को इन्स्टलेशन डिभिडि किनेर ल्याउनुहोस् । कम्प्युटरलाई Windows7को इन्सटलेशन डिस्कबाट बुट गर्नुहोस् । Repair Your Computer सिलेक्ट गर्नुहोस् । Command Prompt सिलेक्ट गर्नुहोस् । त्यसपछि copy c:\_windows\_system32\_sethc.exe c:\_ टाईप गर्नुहोस् र किबोर्डबाट इन्टर बटन दबाउनु होस् । यसपछि copy c:\_windows\_system32\_cmd.exe c:\_windows\_system32\_sethc.exe टाईप गरी इन्टर बटन दबाउनु होस् । Yesटाईपगरी इन्टर बटन दबाउनु होस् । कम्प्युटरलाई पुनः हार्डडिस्कबाट बुट गर्नुहोस
२०७३ चैत्र १५, मंगलवार १६:५८२०७३ चैत्र १५, मंगलवार १६:५८२०७३ चैत्र १५, मंगलवार १६:५८ by Ghanshyam Sagar
स्मार्टफोन ह्याङ्ग भएर हैरान हुनुहुन्छ? यस्तो गर्नुस्
अहिलेको जमानामा प्रविधिले मान्छेको जीवनशैलीलाई सहज बनाए पनि मान्छे यसको दासताबाट पनि मुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन। प्रविधिमा केही न समस्या समस्या देखा परिरहन्छ र यसले मान्छेको समय पनि उत्तिकै खर्च गर्दछ। त्यस्तै फोनले जीवनशैलीलाई सहज बनाए पनि यो समस्यामुक्त भने छैन। के तपाईँ स्मार्टफोन ह्याङग हुने तथा तात्ने समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ? यदि यस्तो समस्या झेल्दै हुनुहुन्छ भने यसबाट मुक्ति पाउन यी पाँच उपाय अपनाउनुस्: १. र्‍यामलाई सफा गर्नुस् स्मार्टफोनको समयमा र्‍यामको भूमिका निकै बढेको छ। प्रायले फोन किन्ने बेला र्‍याम कति क्यापासिटीको छ भनेर सोध्ने गर्छन्। तर र्‍यामको भूमिकाबारे कमै व्यक्तिलाई हुन्छ। कम्प्युटरको जस्तै स्मार्टफोनको स्पीड पनि र्‍यामको क्षमतामा निर्भर हुन्छ। र्‍यामको काम रन टाइममा मेमोरीलाई स्टोर गर्नु हो। जुन डिभाइस बन्द हुनेवित्तिकै सफा हुन्छ। हाम्रो फोन अक्सर खुल्
२०७३ मंसिर ३०, बिहीबार ०६:३३२०७३ मंसिर ३०, बिहीबार ०६:३३२०७३ मंसिर ३०, बिहीबार ०६:३३ by Ghanshyam Sagar
याहुका एक अर्ब प्रयोगकर्ताको महत्वपूर्ण जानकारी चोरी
३० मंसिर । एक अर्ब भन्दा बढी प्रयोगकर्ताको इमेल एकाउन्डबाट ह्याकरले महत्वपूर्ण जानकारी चोरी गरेको याहुले जनाएको छ । सन् २०१३ यता ह्याकरले आफ्ना एक अर्ब भन्दा धेरै प्रयोगकर्ताको इमेलबाट महत्वपूर्ण जानकारी चोरी गरेको याहुले जनाएको हो । ह्याकरले प्रयोगकर्ताको नाम, फोन नम्बर, पासवर्ड र इमले ठेगाना चोरी गरेका हुन् । तर बैंक तथा भुक्तानि डाडा भने चोरी नभएको याहुले जनाएको छ । सन् २०१४ मा मात्रै ५० करोड एकाउन्ट ह्याकरको सिकार बनेको याहुको भनाई छ । ह्याकरबाट आफ्ना जानकारी सुरक्षित राख्नका लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो पासवर्ड तथा सेक्युरेटी प्रश्न परिवर्तन गर्नु पर्ने याहुले बताएको छ ।
२०७३ आश्विन ११, मंगलवार १६:४२२०७३ आश्विन ११, मंगलवार १६:४२२०७३ आश्विन ११, मंगलवार १६:४२ by Ghanshyam Sagar
काठमाण्डौ, ११ असोज । बैतडी जिल्ला बासुलिंग गााबिस वडा नं ६ गणागाउँमा २०२६ सालमा जन्मेका लबदेब तथा कलावती भट्टका छोरा दिनबन्धु भट्टले संसारकै चर्चित र सबैको सपनाको केन्द्र हार्वड विश्वविद्यालयको वैज्ञानिक पदमा नियुक्त भएर आफु र नेपाललाई विश्वसामु चिनाएका छन् । भट्टले एसएलसी सम्मको शिक्षा श्री बासुदेब माबि लिस्किटा बैतडीबाट आर्जन गरेका हुन् भने उच्च शिक्षा बनस्थली बालाजु क्याम्पसबाट र बिएस्सीमा त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट गरेका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट माइक्रोबाइलोजी बिषयमा स्नात्तकोत्तर गरी त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्यापन गराई रहेका भट्ट अमेरिकाको ओहायो स्थित मियामी बिश्वबिद्यालयबाट एमएस गर्न फ्रिस्कोलरसिप पाए पछि अमेरिका गएका थिए । हावर्डमा बिश्वबिद्यालयमा पढ्नकै लागि आवेदन दिने मध्ये ६ प्रतिशतले भर्ना पाउने ठाउमा नेपालको ग्रामिण बस्तीमा जन्मेका भट्टले जागरि खोज्ने सिलसिलामा आवेद
२०७३ भाद्र २६, आईतवार ०९:१९२०७३ भाद्र २६, आईतवार ०९:१९२०७३ भाद्र २६, आईतवार ०९:१९ by Ghanshyam Sagar
नेपालको इन्टरनेट सबैभन्दा महंगो
काठमाडौं, २६ भदौ । नेपालमा आधा दर्जनभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी छन्। यी कम्पनीबीच कसले सस्तो शुल्कमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । तर, पनि नेपालमा इन्टरनेट सेवा महंगो भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालको इन्टरनेट सेवा शुल्क निकै महँगो छ। शुल्क महंगो भए पनि त्यस अनुसारको सेवा उपलव्ध छैन। तोकिएबमोजिम इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। नेपालमा इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय गेट वे एउटै मात्र हुनुनै इन्टरनेट शुल्क महंगो हुने प्रमुख कारण हो। एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे हुँदा एकाधिकार बजार सिर्जना भएको हो। नेपालमा अहिले भारतको बाटो भएर मात्र इन्टरनेट ल्याउने गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ।
२०७३ भाद्र १३, सोमबार १५:११२०७३ भाद्र १३, सोमबार १५:११२०७३ भाद्र १३, सोमबार १५:११ by Ghanshyam Sagar
फेसबुकमा अब ४४ भाषामा कुरा गर्न सकिने
संसारमा १ सय ७० करोडभन्दा बढी मानिसले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको प्रयोग गर्छन् । यी प्रयोगकर्तामध्ये आधाले मात्रै अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्छन् भने बाँकी आधा प्रयोगकर्ताले आफ्नै अन्य भाषा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा एकअर्कासित भाषागत रुपमा संवाद हुन गाह्रो भएको थियो । यसै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै फेसबुकले सबैलाई समेट्न धेरै समयदेखि विभिन्न भाषामा निर्माण गर्ने काम गरिरहेको थियो । अब फेसबुकले आफूलाई विभिन्न ४४ भाषामा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसले गर्दा अब अन्य भाषामा लेखेको स्ट्याटस तुरुन्त रुपान्तरण गरी पढ्न र बुझ्न सकिने भएको छ। रुपान्तरण गरिएको भाषा कामचलाउ मात्र हुने भएकाले कहिलेकाहिँ यसले गरेको ट्रान्सलेसन पूर्ण सही भने नहुन पनि सक्नेछ। फेसबुकमा जोडिएका सबै मानिसले एक अर्कासँग आफ्नो कुरा साटासट गर्न सकून भन्ने योजनाका साथ कम्पनीले यस्तो गरेको हो। यो पहुँच फेसबुकका प्रयोगकर्ताक
२०७३ भाद्र ७, मंगलवार १८:२५२०७३ भाद्र ७, मंगलवार १८:२५२०७३ भाद्र ७, मंगलवार १८:२५ by Ghanshyam Sagar
घडी बायाँ हातमै किन लगाइन्छ ?
घडी बायाँ हातमा बाँध्नुभन्दा पहिले खल्तीमा राख्ने चलन थियो । तपाईंले पनि पुरानो जमानामा चल्ने घडी देखेको हुनुपर्छ, जसलाई खल्तीमा राख्ने गरिन्थ्यो र त्यहीँबाट झिकेर समय हेर्ने गरिन्थ्यो । केही मानिसले चेन भएको घडी हातमा बाँध्न थाले र त्यही बेलादेखि घडी हातमा लगाउने चलन सुरु भएको मानिन्छ । बायाँ हातमा घडी बाँधिनुको मुख्य कारण धेरैजसो मान्छेले आफ्नो दाँया हातले काम गर्ने गर्नु नै हो । जब हाम्रो दायाँ हात काममा व्यस्त हुने गर्दछ, बाँया हातमा यस्तो बेला समय हेर्न सजिलो हुन्छ यसो गर्दा दाँया हातले काम गरिरहन पनि सकियो । बायाँ हातमा घडी बाँध्नु सामान्यजस्तै भएपछि घडीहरू पनि यस्तै हिसाबले बनाउन थालियो । दाँया हातले अन्य काम गर्दा हाम्रो घड़ी सुरक्षित पनि रहने भयो । यसो गर्दा घडी फोहर हुने, स्क्रेच हुनेर काम गर्दा विभिन्न ठाउँ जस्तै टेबुलमा ठोक्किने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
२०७३ भाद्र ५, आईतवार १२:३४२०७३ भाद्र ५, आईतवार १२:३४२०७३ भाद्र ५, आईतवार १२:३४ by Ghanshyam Sagar
आविष्कार केन्द्रका लागि घरदैलो अभियान
काठमाडौं ५ भदौ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र निर्माण गर्न ‘घरदैलो अभियान’ सुरु भएको छ । पटकपटक सरकारसँग आग्रह गर्दा पनि आविष्कार केन्द्रका लागि आवश्यक सहयोग नपाएपछि यसका परिकल्पनाकार महावीर पुनले घरदैलो अभियान सुरु गरेको बताएका छन् । रोमन म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महाविर पुनले भने, ‘अबको युग विज्ञान र प्रविधिको युग भएकाले विज्ञान–प्रविधिको विकासबिना मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । सरकारले जतिसुकै आर्थिक क्रान्तिका कुरा गरे पनि विज्ञान र प्रविधिको विकास नभएसम्म मुलुकले फड्को मार्न सम्भव छैन ।’ सरकारको मुख ताकेर मात्र बसिरह्यो भने आविष्कार केन्द्र पनि सम्भव नहुने भन्दै उनले यसका लागि घरदैलो अभियान सुरु गरिएको बताएका छन् । शनिबार पर्वतको सदरमुकाम कुश्माबजारमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पुनले भने, ‘विगत चार वर्षदेखि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सञ्चालनका लागि तयारी भएको छ तर सरकारले बेवास्त
२०७३ असार २४, शुक्रबार १६:४७२०७३ असार २४, शुक्रबार १६:४७२०७३ असार २४, शुक्रबार १६:४७ by Ghanshyam Sagar
अङ्ग दानका लागि स्वास्थ्य एप ल्याउँदै एप्पल
काठमाडौं, २४ असार । मोबाइल कम्पनी एप्पलले केही समयभित्रै अंग दानलाई लक्षित हुने गरी नयाँ एप्लीकेशन ल्याउने भएको छ । सन् २०१६ कै डिसेम्बरसम्ममा प्रयोगमा ल्याइने यस एप्लीकेशनमा कम्पनीले साइन अप गरेर आइफोन प्रयोग गर्नेहरुले अंग दान गर्नका लागि रजिस्ट्रेसन गर्न सकिने बताएको छ । कम्पनीका सीइओले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एप्पल प्रयोगकर्ताले स्वास्थ्य एप्लीकेशनको प्रयोग गरेर अंग दानबारे जनचेतना दिइने बताइएको छ । यस एपमार्फत् प्रयोगकर्ताहरुले आखाँ र टिस्स्यु दान गर्न सक्नेछन् ।साथै यसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थका बारेमा पनि जानकारी दिनेछ । - एजेन्सी
२०७३ असार १०, शुक्रबार १६:१५२०७३ असार १०, शुक्रबार १६:१५२०७३ असार १०, शुक्रबार १६:१५ by Ghanshyam Sagar
ल्यापटप खुलै छोडेर सुत्नुहुन्छ ? थाहा पाउनुस् यसबाट हुने नोक्सान
ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा डाटा बढी हुँदा यसको स्पीडमा असर पर्न जान्छ । हार्ड डिस्कको मेमोरी भरिएमा अथवा सफ्टवेयर नियमित अपडेट नभएमा यसको स्पीड कम हुने गर्दछ । यस कारण कम्प्युटर स्टार्ट हुन पनि सामान्यभन्दा बढी समय लाग्छ । यस्तो बेलामा केही प्रयोगकर्ता यसलाई सटडाउन गर्न चाहँदैनन् जब उनी धेरै घण्टासम्म पनि सिस्टमले काम नगर्दा सिस्टमलाई स्लिप मोडमा राखेर खुलै छोड्ने गर्दछन् । तपाईं अल्छिपनको कारण अथवा सिस्टम अन गर्ने लाग्ने समयलाई बचाउन कम्प्युटरलाई अफ समयमा पनि अन राखिरहनुहुन्छ बुझ्नुस् यस्तो काम गरेर तपाईंले सिस्टमको आयु कम गर्दै हुनुहुन्छ । राती सुतिरहेको बेला धेरैपटक पावर कट पनि हुने गर्दछ । पटकपटक सिधै बन्द हुँदा ल्यापटप तथा कम्पुटर सिस्टमको मेसिन ड्यामेज पनि हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त खराब मौसममा चम्किने बिजुलीबाट अन सिस्टम खराब हुन सक्दछ । सधैँ डिभाइसलाई अन राख्दा डिभाइसको आयु पनि कम ह